रमणीय रामारोशन - गन्तब्य - कान्तिपुर समाचार
कार्तिक १९, २०७६ तर्कबहादुर चलाउने
काठमाडौँ — अछामको उत्तर-पूर्वीमा अवस्थित रामारोशन क्षेत्र प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण छ । यो क्षेत्रलाई सरकारले सय नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा राखेको छ । प्रचारप्रासरको अभावमा यो क्षेत्र ओझलमा परेको छ ।
'राम' र 'रोशन' नाम गरेका दुई दाजुभाइको नामबाट यस क्षेत्रको नाम 'रामारोशन' बन्न पुगेको स्थानीवासीयहरु सुनाउँछन् । समुद्री सतहबाट २३०० देखि २९०० मिटरसम्मको उचाइमा यो क्षेत्र पर्छ । १२ वटा ताल र १८ वटा मैदान भएका कारण यस क्षेत्रलाई 'बाह्र बण्ड अठार खण्ड' भनेर पनि चिनिन्छ ।
रामारोशन क्षेत्रका १२ तालमध्ये सबैभन्दा ठूलो ताल जिगाले हो । ताल पुरै घुम्न दुईदेखि तीन घन्टासम्म लाग्छ । मनै लोभ्याउने तालहरु । आकाश छुने जमिनका फाँटहरु,तालमा पौडिरहेका हाँस, नाचिरहेका डाँफे, दौडिरहेका मृग र कस्तुरी यहाँद देख्न पाइन्छ । विभिन्न ९ प्रजातिका लालिगुराँस र चराचुरुङ्गीहरु यहाँ पाइन्छन् ।
चराचुरुंगीको आवाजले यहाँको सिमसारमा झन् रोमाञ्चित बनाइदिन्छ । त्यतिमात्र नभएर त्यहाँ तराईमा पाइने वन्यजन्तु, रुख बिरुवा जडीबुटीदेखि हिमाली क्षेत्रमा पाइने डाँफे, मुनाल, घोड, हिमचितुवा , बँदेल र लोपोन्मुख प्रजातिमा पर्ने काँडेभ्याकुर, हाब्रे जस्ता विभिन्न प्रजातिका जीवहरुको बासस्थानको रुपमा पनि प्रख्यात मानिन्छ रामारोशन ।
जडिबुटी प्रशोधनको केन्द्र बिन्दु बन्न सक्ने आधारहरु यो क्षेत्रसँग छ । हरियो र नीलो काइनेटिक पत्थर, गेरु लगायतका बहुमूल्य धातुको खानी पनि यही क्षेत्रमा देख्न सकिन्छ ।
रामारोशन क्षेत्रको बीच भागमा रहेको किनिमिनी मैदानसहितका अन्य फाँटहरु उपत्यका भन्दा कम छैनन् । यही मैदानमा तत्कालीन माओवादीका लडाकुहरु प्रशिक्षण लिने र दिने काम हुन्थे ।
यस क्षेत्रमा एयरपोर्ट बनाउन सकिने पर्याप्त आधारहरु भएपनि यी मैदानहरु संरक्षणको पर्खाइमा छन् । तीनतिरबाट डाँडाकाँडाहरुले घेरेर बीचमा दुईवटा विशाल मैदान बनेको रामारोशन क्षेत्रमा सरकारले पर्याप्त लागनी गर्न सकिरहेको छैन । मुलुककै नमुना पर्यटकीयस्थल बन्ने सम्भावना बोकेको यो भूमि अहिले ओझेलमा छ ।
यो क्षेत्रको अर्को आकर्षण हो, चाखाडाँडा । यो डाँडाको चुचुरोदेखि राति चिसापानी, नेपालगन्ज, महेन्द्रनगरमा बत्ती बलेको सहजै देख्न सकिन्छ ।
चाखाडाँडा यहाँको सबैभन्दा उच्च ठाउँमा अवस्थित अटल र चहकिलो स्तम्भका रुपमा रहेको छ । यहाँबाट पर्यटन क्षेत्र मात्र नभई प्याराग्लाईडिङ, रकक्लाईम्बिङ जस्ता सहासिक खेलबाट पर्यटनलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । जलबिहार पनि यसको अर्को सम्भावना हो ।
यस क्षेत्रमा पर्यटकहरुका लागि स्मारिक मानिने भूमि आकासे भीरमा बांगे छहरा अनि गणचुच्चे र रोशन डाँडाले सबैलाई लोभ्याउँछ । रामारोशनकै छाँगा छहरा, आकास नै छुने गरी हरबखत उभिरहेका पहाडका थुम्काहरु मात्र होइन भेडाबाख्रा, गोरुभैंसी र जंगली जनावरले चरिरहेका दृष्यले पनि सबैलाई आनन्दको अनुभूति दिइरहेको हुन्छ ।
गोठालाहरुले गाएको ठाँडी भाकामा गोरु र भैसीका घाँटीमा झुण्डियाइएका घाँडाहरुले संगीत भरिदिन्छ । चराहरुको संगीतले त त्यहाँ जाने मानिसलाई संगीतमा डुबाइदिन्छ ।
अछामको सदरमुकाम मंगलसेनबाट झन्डै ४० किलोमिटर पूर्व–उत्तरमा अवस्थित रामारोशन क्षेत्रमा कच्ची बाटो छ । यहाँ वर्षातको समय बाहेक रामारोशनसम्म जीप, मोटरसाइकल र ट्याक्टरहरु पुग्छन् । पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको अछामको रामारोशन क्षेत्रका १२ वटा तालहरुमध्ये संरक्षणको अभावमा ८ वटा ताल मात्र रहेको छ । तालहरु सुक्न थालेका छन् । समयमै तालको व्यवस्थापन नीति निर्माण नहुँदा ओझेलमा परेको छ ।
पर्यटकीयस्थल निर्माणको लागि कुनैपनि ठाउँको वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान गरि नीति निर्माण गर्नु अतिआवश्यक मानिन्छ । अध्ययन अनुसन्धानको पाटो पनि कमजोर छ । व्यवस्थापन नीति निर्माण हुन सकेको छैन ।
यो क्षेत्र पर्यटकीय स्थल मात्र नभएर जैविक विविधताको पनि धनी हो । त्यहाँ विभिन्न प्रजातिका चराचुरुङ्गी, आईयूसीएनको रातो सूचीमा सूचिकृत हाब्रे जस्ता जीवको बासस्थानक पनि हो ।
त्यस क्षेत्रको वनस्पति र जीवहरुको वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्ने,पाइने वनस्पतिको सूचिकृत गर्न सकिएको छैन । यस्ता विषयमा राज्यले ध्यान दिन जरुरी छ ।
पर्यटकीय, धार्मिक र अनुसन्धान गरी अति महत्वपूर्ण स्थानको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ रामारोशन क्षेत्रलाई । रामारोशन क्षेत्रले काखमा च्यापेका प्रकृतिका अनुपम उपहारलाई संरक्षण र प्रचारप्रसार गरी यस क्षेत्रको सौन्दर्यतालाई बेच्न सके विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ ।
लेखक वातवरण विज्ञान केन्द्रीय विभागका विद्यार्थी हुन् । प्रकाशित : कार्तिक १९, २०७६ १६:४५
नेकपालाई उपचुनावको ‘चुनौती’
कार्तिक १९, २०७६ बबिता शर्मा
काठमाडौँ — सत्तारुढ नेकपाले पार्टी भित्रको अन्तरकलह, सरकारका कामकारवाहीमा चुलिँदै गएको असन्तुष्टि र प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको रणनीतिका कारण मंसिर १४ गते हुने उपचुनाव सहज नरहेको मूल्यांकन गरेको छ ।
पछिल्लो समय विभिन्न संघसस्थाको निर्वाचनमा पार्टी निकटका व्यक्तिहरुको पराजयको शृंखला बढ्न थालेपछि नेकपा उपनिर्वाचनमा झस्किएको हो । यी मुख्य तीनवटा चुनौती चिर्दै विगतको चुनावमा आर्जित प्रतिष्ठा जोगाउन नेकपाले आन्तरिक रणनीति बनाएको छ ।
नेकपाको असोज २९ मा बसेको सचिवालय बैठकले चुनावको सम्भावित अवस्था मूल्यांकन गरेको थियो । त्यही बैठकपछि नेकपाले २ कात्तिकमा ‘विशेष परिपत्र–५’ जारी गरी पार्टीको आन्तरिक संरचनामा पठाएको छ । दुई पेज लामो परिपत्रमा सबै तहका उम्मेदवार चयनको प्रक्रिया र पार्टीको चुनावी रणनीति छ ।
नेकपाको उक्त विशेष परिपत्रमा उपचुनाव ‘नेकपाका लागि प्रतिष्ठा’को विषय रहेको उल्लेख छ । यसबाहेक चुनावी चुनौती सामना गर्न पार्टी नेतादेखि जनप्रतिनिधिलाई समेत निर्देशन दिइएको छ ।
नेकपा प्रमुख सचेतक देव गुरुङ चुनाव चुनौतीरहित कहिल्यै नहुने बताउँछन् । तर यसलाई प्रतिष्ठासँग जोड्नु ठिक नभएको उनको भनाइ छ । ‘लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा हुनु स्वभाविक प्रक्रिया हो । निर्वाचन कहिल्यै पनि चुनौतीरहित हुँदैन । अहिले कम्युनिष्टको सरकार, नीति कार्यक्रमप्रति जनताको आकर्षण बढ्दो छ । होलान्, कतिपय कमीकमजोरी, सीमा कम्युनिष्टहरुको । तर जतिसुकै कमीकमजोरी भएपनि त्यसलाई सुधार गर्दै जानुको विकल्प छैन । त्यसकारण अहिलेको उपचुनावको माहोल कम्युनिष्टकै पक्षमा देखिएको छ ।’
‘हाम्रो काँधमा हिजो विजयी बनेका स्थानहरुमा पार्टीलाई पुनः विजयी बनाउने र नयाँ ठाँउहरुमा पनि पार्टीको जित सुनिश्चत गर्दै पार्टीप्रतिको बढ्दो जनआकर्षणलाई पुष्टि गर्ने चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी आएको छ,’ कान्तिपुरलाई प्राप्त विशेष परिपत्रमा उल्लेख छ, ‘हामीले यो चुनौतीको सामना गर्नैपर्छ ।’ यही चुनौतीलाई सामना गर्नेगरी उपनिर्वाचनको तयारीमा जुटन र समर्थक शुभेच्छुकहरुलाई समेत परिचालित गर्न सम्बन्धित पार्टी कमिटी, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि र सदस्यहरुलाई पार्टीले निर्देश गरेको छ ।
चुनावी तयारीका विषयमा पनि परिपत्रमा केही बुँदा समेटिएको छ, जसमा सम्बन्धित प्रदेश, जिल्ला, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय, महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँ कमिटीले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तगर्तका उपनिर्वाचनको तयारी कार्य प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन निर्देशन छ । यसका लागि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने, प्रचारका विषय यकिन गरेर प्रचार सामाग्री बनाउन पनि तत्तत् कमिटीलाई निर्देशन दिइएको छ । यसबाहेक चुनावी तयारीकै लागि निर्वाचन परिचालन कमिटी, प्रचार कमिटी, स्वयंसेवक परिचालन कमिटी, स्रोत व्यवस्थापन कमिटीलगायतका आवश्यक कमिटी बनाउन पनि नेकपाले परिपत्रमार्फत निर्देशन दिएको छ ।
चुनाव जसरी पनि जित्नुपर्ने भएकाले आइतबार उम्मेदवार छनौटमा पनि नेकपाले त्यही रणनीति अनुसार निर्णय गरेको छ । आइतबारको सचिवालय बैठकले कास्की २ को प्रतिनिधिसभाका लागि विद्या भट्टराई र दाङ ३ (ख) प्रदेशसभा सदस्यका लागि विमला वलीलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्‍यो ।
हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि खाली उक्त क्षेत्रको उपनिर्वाचनमा उनकै पत्नी भट्टराईलाई चुनावी मैदानमा उतार्ने निर्णय लिएको हो । भट्टराई राजनीतिबाट बाहिर थिइन् । नेकपाले गाडी दुर्घटनामा निधन भएका उत्तरकुमार वलीको क्षेत्रमा उनकी पत्नी विमलालाई उम्मेदवार बनायो ।
यी दुवै क्षेत्रमा नेकपाले त्यतिबेलाको भोट अन्तरभन्दा दिवंगत नेता अधिकारी र वलीका पत्नीलाई अगाडि सार्दा ‘सहानुभूति’को भोट तानिन सक्ने मूल्यांकन समेत गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले राम्रो काम गरेको दाबी गरिरहेको बेला नेकपाले उम्मेदवार चयनमा ‘सहानुभूति’का भोटलाई ध्यान दिनुले उपचुनाव चुनौतीपूर्ण छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।
‘यी दुई ठाउँमा उम्मेदवार चयन गर्दा पार्टी संगठनमा योगदान र जनसम्बन्ध राम्रो भएका व्यक्ति भन्दा चुनाव जितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको हो । तलबाट आएको सिफारिस र सचिवालय बैठकमा पनि उहाँहरुलाई चुनाव लडाउँदा अनुकूल हुन्छ भन्ने बुझाई थियो’ नेकपा सचिवालयका एक नेताले भने ।
निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताको मिति घोषणा गरेलगत्तै २९ असोजमा नेकपा सचिवालय बैठक बसेको थियो । पार्टी एकताका वाँकी काम टुंगाउने र २५–२६ असोजमा भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणको समीक्षा गर्ने अपेक्षा गरिएको बैठकमा ती विषय छोडेर उपनिर्वाचनलाई एजेण्डा बनाएर छलफल गरिएको थियो । त्यही छलफलपछि चुनाव केन्द्रित विशेष परिपत्र जारी गर्ने निर्णय भएको हो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य एक, प्रदेशसभा सदस्य तीन, उपमहानगरपालिका प्रमुख एक, गाउँपालिका अध्यक्ष तीन, उपाध्यक्ष एक र ४३ वडाध्यक्ष पदका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ ।
अहिले चुनाव हुन लागेका ५२ पदमध्ये २०७४ को चुनावमा तत्कालीन एमाले २६ र माओवादीले जितेका २ गरी २८ सिट नेकपाका थिए । त्यसमध्ये धेरैको चासो एक प्रतिनिधिसभा, दुई प्रदेशसभा सदस्य र एक उप महानगरपालिकामा छ, जहाँ २०७४ को चुनाव नेकपाले जितेको थियो । अर्को एक प्रदेश सभामा पनि तत्कालीन जनमोर्चाका उम्मेदवारले बाम गठबन्धनको हैसियतमा चुनाव जितेका थिए । कास्की, भक्तपुर धरान उपमहानगरपालिका तुलनात्मक रुपले सचेत मतदाता बढी भएका स्थान हुन् । त्यसैले ती स्थानमा चुनाव हार्दा जाने सन्देश फरक हुने नेकपाको मूल्यांकन छ ।
यी निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव हार्दा सरकारले राम्रो काम नगरेको तथा भित्रैबाट पार्टी नेकपाको एकता नभएको सन्देश जाने भय नेकपाका नेतालाई छ । पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल चुनाव लोकतन्त्रको रुपमा भएको हुँदा कसैले पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउन नहुने बताउँछन् ।
‘हामीले उपचुनावलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छैनौं । लोकतान्त्रिक अभ्यास भित्र समाजलाई गतिशील ढंगले अगाडि बढाउने सन्दर्भमा संविधानको व्यवस्थाअनुसार उपचुनाव हुन लागेको हो,' महासचिव पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘लोकतन्त्रलाई सबल बनाउने माध्यमको रुपमा चुनावलाई बुझेका छौं । अरुले पनि त्यसरी नै लिनुपर्छ ।’
खासगरी विपक्षी र अन्य दलले समेत कास्की २ को उपचुनावलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएपनि त्यसक्षेत्र लगायत अन्यत्र विगतको मतपरिणाम भन्दा दोब्बर मत अन्तरले चुनाव जित्ने दावी महासचिव पौडेलले गरे । ‘मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचन मध्ये धेरैको ध्यान कास्की २ मा छ । तर, त्यहाँ हामीले विगतभन्दा अहिले दोब्बर मतअन्तरले चुनाव जित्छौं ।’
नेकपाले चुनावी चुनौतीको सामना गर्न पुरानो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने रणनीति पनि बनाइसकेको छ । यसैअनुसार कार्तिक ६ गते प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीबीच विगतको चुनावी गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने सहमति बनिसकेको छ । उक्त सहमतिलाई आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले औपचारिक रुपमा निर्णय पनि गरेको छ ।
विगतको गठबन्धनमा जहाँ जसले सघाएको थियो, अहिले पनि त्यसै अनुसार चुनाव लड्ने सहमति भएको छ । जसअनुसार नेकपाले बाग्लुङ-२ (ख) मा जनमोर्चालाई सघाउने र अन्य क्षेत्रमा जनमोर्चाले नेकपालाई सहयोग गर्नेछन् । तरपनि नेकपा दबाबमा छ ।
यसकारण नेकपा दबाबमा
विभिन्न संघसंस्थामा हार
उपचुनावभन्दा अगाडि भएका विभिन्न संघसंस्थामा हार व्यहोरेपछि नेकपाका लागि उपचुनाव चुनौतीपूर्ण बनेको छ । लगातार हार ब्योहोरेको नेकपाले केही दिन अगाडि भएको गैर आवसीय नेपाली संघ (एनआएएन)को चुनावमा भने आफ्नो पक्षका उम्मेदवारलाई जिताउन सफल भएको थियो ।
७ भदौ २०७६ मा काठमाडौंमा भएको वैदेशिक रोजगार व्यावसायी संघको चुनावमा नेकपा पराजित भयो । यहाँ कांग्रेस निकट प्यानलले जित हासिल गर्‍यो । यसअघि नेकपा निकटको नेतृत्वले जितेको थियो ।
२२ भदौ २०७६ मा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओलीको गृहजिल्ला दमक उद्योग वाणिज्यसंघको निर्वाचनमा नेकपा निकट व्यवसायी प्यानल पराजित भयो । त्यहाँ कांग्रेस नेतृत्वको समूहले नेकपा नेतृत्वको व्यवसायीलाई पराजित गरेको थियो ।
२१ भदौ २०७६ मा भएको ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को ४१ औ वार्षिक साधारणसभामा तथा नयाँ नेतृत्वका लागि भएको निर्वाचनमा नेकपा निकट प्यानल पराजित भयो ।
कांग्रेस निकट लोकतान्त्रिक प्यानलले नेकपा निकट प्यानललाई पराजित गरेको थियो । तर, महासचिव भने नेकपा नेतृत्वको प्यानलले जितेको थियो । नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको गृहजिल्ला चितवनमा केही समयअघि भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी संघको निर्वाचनमा नेकपा पराजित भएको थियो ।
पार्टीभित्रबाट हुन सक्ने अन्तर्घातको खतराले पनि उपचुनावमा नेकपालाई झस्काएको छ । सचिवालय सदस्य एवं संगठन विभाग प्रमुख वामदेव गौतमले अन्तर्घातको सम्भावना रहेको भन्दै कास्की–२ चुनाव लड्न नमानेपछि नेकपाभित्रको अन्तरकलह सतहमा आएको थियो ।
यसबाहेक बेला दुई अध्यक्षबीच हुने घोचपेच र वरिष्ठ नेता माधव नेपालका लगातारका असन्तुष्टिले पनि उपचुनाव प्रभावित हुने तल्ला तहका नेताहरुको आशंका छ । सोमबारमात्रै नेकपाको सचिवालय बैठकबाट सातै प्रदेशका प्रमुखको नाम सिफारिसमा पनि नेता नेपालले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
‘केन्द्रको लडाईंको असर स्वभाविक रुपमा यहाँको चुनावमा पर्न सक्छ,’ नेकपा कास्कीका एक नेताले सुनाए, ‘हारिन्छ भनेर चुनाव लड्दिनँ भन्ने वामदेव गौतमको विज्ञप्ति आएदेखि नै यहाँको माहौल बिग्रिएको छ । माहौल बनाउन मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’
४ असोजको सचिवालय बैठकमा दुई अध्यक्षले कास्की-२ बाट चुनाव लड्न गरेको आग्रह अस्वीकार गर्दै नेता गौतमले विज्ञप्ति निकालेर भनेका थिए, ‘यसअघि (२०७४ मा) प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका लागि आफ्नो पुरानो निर्वाचन क्षेत्र बर्दिया-१ बाट उम्मेदवार भएको यहाँहरुमा विदितै छ । उक्त निर्वाचनमा तत्कालीन वाम गठबन्धनसँग विपक्षीको तुलनामा ३२ हजार मत बढी थियो । तर, म पराजित हुनुपर्यो । त्योभन्दा अत्यन्त कम मतान्तर रहेको कास्कीमा निर्वाचन उठ्नु भनेको म फेरि पराजित हुनु हो ।’
प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्रीहरुले सरकारले धेरै राम्रो काम गरेको दाबी गरेपनि नेकपाभित्रैबाट सरकारको आलोचना हुने गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष दाहालले बारम्बार अपेक्षाकृत ढंगले सरकारले काम गर्न नसकेको बरु सरकार चलाउनेहरुले जनताको चासो भुलेको भनेर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि सरकारले जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् ।
सरकारका कामकारवाहीको समिक्षा गर्न आवश्यक भएको उनले बताउने गरेका छन् । यस्तै सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम, झलनाथ खनालले पनि सरकारको कामकारवाहीबाट सन्तुष्ट नभएका अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारको कामकारवाहीको नतिजा उपचुनावमा देखिन सक्ने भय नेकपाका नेताहरुलाई छ । अघिल्लो चुनावमा गरेको बाचा अनुसार काम नभएको भनेर पार्टीभित्रै आलोचना हुँदै आएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सदन र सडकमा सरकारमाथि निरन्तर प्रश्न उठाइरहेको छ । कांग्रेसको बुझाइमा अहिलेको उपचुनाव नेकपाका लागि प्रतिकूल र आफ्ना लागि अनुकूल छ । यही बुझाईसहित कांग्रेस उपचुनाव आफ्नो पक्षमा पार्ने दाउमा छ । ‘सरकारको आफ्नो कार्यकाल झन्डै दुई वर्ष हुन लाग्दा नेपाली जनतालाई पूरै निराश बनाएको’ कांग्रेसको निष्कर्ष छ । १७ भदौमा सम्पन्न कााग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले ओली नेतृत्वको सरकारको डेढवर्षीय कार्यकालको समीक्षाको एजेण्डामा यस्तो निष्कर्षमा पुगेको थियो । बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले जनतालाई पुरै निराश बनाएको बताएका थिए ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा अहिले सरकार प्रतिकूल वातावरण रहेको र आफ्नो पार्टी अनुकूल अवस्थामा रहेकोले उपनिर्वाचनमा जित पक्का भएको दाबी गर्छन् ।
'उपचुनाव नेपाली कांग्रेसको पक्षमा हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी छौं,' प्रवक्ता शर्माले भने, 'यसको दुईवटा कारण छन् । पहिलो, यो नियमित निर्वाचन नभएर उपनिर्वाचन हो । उपनिर्वाचन हुँदै गर्दा यो सरकारले जे जिम्मेवारी लिएको थियो त्यो बमोजिम सरकारको अवस्था के छ भनेर नागरिकले पनि समीक्षा गर्ने र आफ्नो मत अभिव्यक्त गर्ने हो । दोस्रो, नेपाली कांग्रेस अघिल्लो निर्वाचनमा हार्दै गर्दा जुन प्रकारको अव्यवस्थाको साथमा गएको थियो तुलनात्मक रुपमा अहिले व्यवस्थित ढंगले जाँदैछौं । यो बीचमा जागरण अभियानाले पनि पार्टीलाई गति दिएको छ, त्यसकारण हाम्रो लागि अनुकूल छ ।'
कांग्रेसले सरकारमाथि बालुवाटार जग्गा विवादमा नेकपा नेतालाई बचाएको, वाइडवडी विमान खरिद भ्रष्टाचार लुकाएको, संस्थागत भ्रष्टाचार, राज्य संरचनाहरूको दुरुपयोग र राजनीतिकरण गरेको आरोप लगाएको छ । यसबाहेक बालिका निर्मला पन्तका बलात्कारी र हत्यारापत्ता नलागेको, गैरन्यायिक हत्या बढेको, किलो सुनकाण्डको छानविन निष्कर्षमा नपुगेको, विराटनगर जुटमिलको सेयरखरिद बिक्रीमा अनियमितामा ध्यान नदिएको, मेलम्ची खानेपानी ल्याउन नसकेको भनेर कांग्रेसले सरकारमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ ।
यसबाहेक नेत्रविक्रम चन्द समूहसँग वार्ता वा संघर्ष मध्ये मुख्य के हो भनेर सरकारले प्राथामिताका नछुट्याएको, संविधान संशोधनमा सरकारले ढुलमुले नीति ल्याएको, शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन नसकेको आरोप पनि कांग्रेसले लगाएको छ ।
कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारका पदासिनहरुमा संवैधानिक व्यवस्था, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अवमूल्यन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ भन्ने विपक्षीको सुरुदेखिको आरोप छ । २०७४ मा बामगठबन्धनका अगाडि धक्का खाएको कांग्रेस यसपाली पुरै बलियो आत्मबलसहित चुनावमा छ, जसले पनि नेकपामाथि दबाब बनाएको छ ।
कास्की र दाङमा विगतको मतपरिणाम कस्तो थियो ?
२०७४ को मंसिरमा भएको कास्की-२ को चुनावमा तत्कालीन बामगठबन्धनका उम्मेदवार अधिकारीले कांग्रेस उम्मेदवार देवराज चालिसेलाई ८ हजार ५ सय ४६ मतको अन्तरले हराएका थिए । अधिकारीको २७ हजार २ सय ७ र चालिसेको १८ हजार ६ सय ६१ मतआएको थियो ।
दाङ-३ (ख) मा बामगठबन्धनका उम्मेदवार वली २३ हजार ९ सय ७० र कांग्रेस उम्मेदवार बुद्धिराम भण्डारीले १७ हजार ५ सय ३५ मत पाएका थिए । कांग्रेसको भन्दा यहाँ बामगठबन्धनको पाँच हजार भन्दा बढी मतको फरक थियो ।
प्रकाशित : कार्तिक १९, २०७६ १५:५७
सुरु भयो पाँचपोखरी–मेरा ट्रेक